सडकमा धुलो उडाउँदै मोदीको स्वागतको तयारी (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आर्यन धिमाल , २७ बैशाख २०७५
काठमाडौँ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रबार नेपाल आउँदैछन्। उनी जनकपुर हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न लागेका हुन्। जनकपुरमा केही घण्टा बसेर उनी त्यसपछि सिधै काठमाडौँ आउने कार्यक्रम छ।
उनको स्वागतका लागि उनी जाने स्थानहरुमा रंगरोगन, सडक सरसफाई, कालोपत्रे लगायतका कार्यलाई तीव्र पारिएको छ। जनकपुरबाट सिधै काठमाडौँ आउने हुँदा यहाँका सडक मर्मत, सरसफाई, सुरक्षा व्यवस्थालाई पनि चुस्त पारिएको छ। ठाउँठाउँमा नेपाल र भारतको झण्डा हालिएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदी काठमाडौँस्थित हायात रिजेन्सी होटलमा बस्ने हुँदा त्यहाँ जाने प्रमुख सडकलाई केही दिनअगाडि नै कालोपत्रे गरिसकिएको छ। जुन सडक महिनौंदेखि खाल्डाखुल्डीले भरिएको थियो। कतै भने सडकमा धुलो फालेर कालोपत्रे हुँदैछ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतको तामझाम चलिरहँदा पैदल यात्रु भने त्यही धुलोधुँवा छिचोल्दै हिँड्न बाध्य छन्। यस्तै पैदलयात्रु हिँड्ने मार्ग छेउछाउमा रहेका रुख विरुवालाई पनि रंगरोगन लगाएर चिटिक्क पारिएको छ। रातारात सडक पिच, सरसफाई भएको देख्दा पैदलयात्रुहरु पनि छक्क देखिन्छन्।
मोदी दुई दिने राजकीय भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेका हुन्। उनको यो भ्रमण राजनैतिक भन्दा पनि धार्मिक हुने बताइएको छ । उनी नेपाल रहँदा जनकपुरको जानकी मन्दिर, काठमाडौं पशुपति, मुस्ताङमा मुक्तिनाथ लगायतका धार्मिक स्थलहरुको अवलोकन गर्नेछन्।
केही दिन अगाडि कालोपत्रे गरिएको हायात रिजेन्सी होटल जाने सडक